Iziqendu zoVimba - OutBüro
Kwividiyo nganye kunye nakwisiqendu sePodcast seeVoutBuro Voices, sixoxa kunye LGBTIingcali ze-Q, abanini bamashishini (abaqalayo kunye noosomashishini), kunye neenkokheli zasekuhlaleni malunga neshishini okanye umbutho wabo kunye nohambo lwabo lomsebenzi wobungcali ukwazisa, ukufundisa kunye nokukhuthaza abanye. Iziqendu zinokubonisa abaqeshi njengenxalenye ye- LGBTQ ukuthengisa okufikelela eluntwini kunye nophawu lomqeshi.
Julayi 20, 2021 (Ihlaziywe ngoJulayi 22, 2021) E papashwe ngu UDennis Velco
Kule ngqungquthela yeeVoBoro Voices ezibandakanya LGBTIingcali ze-Q, oosomashishini, kunye neenkokheli zoluntu ezivela kwihlabathi liphela, bamba izingxoxo zikaDennis Velco kunye neZizwe eziManyeneyo LGBTInkokeli yabasebenzi be-Q + uGurchaten "Nanoo" Sandhu. Ukufikelela kwakhe kubandakanya imibutho engama-70 ye-UN ngendlela eyahlukileyo yokuxoxisana ngabasebenzi.
Le yinkcazo yokubhaliweyo sisishwankathelo esifutshane, ke qiniseka ukuba umamele okanye ubukele kwaye uthumele nayiphi na imibuzo onokuba unayo kuNanoo kwizimvo.
UNanoo ongummi wase-Bhritane ngokuzalwa, umzali wakhe ufudukile evela eMntla Indian kunye nelifa lesiPunjabi kunye no-Seik okhuliswe ngokomoya. Jonga ividiyo emfutshane eyahlukileyo yengxoxo yethu yokuba LGBTU-Q no-Sikh ngokukhuliswa nokholo olwalusisifundo kum.
UNanoo, yinto abantu abasondeleyo kuye abambiza ngayo, waqala njengomfundi kwi-United Nations. Ukufika kwakhe eSwitzerland kwiminyaka eli-15 eyadlulayo yayikukufundela iinyanga ezi-6 kuphela. Okwangoku akashiyanga- ngaphandle kweholide. Uguqukele kubasebenzi abasisigxina be-United Nations International Labour Organisation (ILO) apho athe wanethuba lokusebenza kumgaqo-nkqubo wamalungelo ezabasebenzi kunye nokulingana.
Umsebenzi wakhe wokuqala kwiZizwe eziManyeneyo wawugcwele ubufanasini kwaye uxelelwe ngokukodwa ngomnye umntu asebenza naye ukuba ahlale egumbini, ayisiyondawo apho uya kuphumelela kwaye uphume njenge-gay. Njengayo yonke imibutho, utshintsho luyenzeka ngokuhamba kwexesha. Omnye wemiceli mngeni eyongezelelekileyo yokusebenza kwiZizwe eziManyeneyo njengabasebenzi kukuba yonke imigaqo-nkqubo kunye nezibonelelo zombutho ngamnye kuma-70 ziyaphononongwa kunye nesiphelo esimiselwe yibhodi yokusebenza enamalungu angamalungu elizwe / ilizwe. Ke, ukuba ezo zinokwenzeka ukuba amazwe enza ulwaphulo-mthetho kubudlelwane besini esifanayo, kunokuba nzima ukufezekisa LGBTQ imigaqo-nkqubo ebandakanyayo nezibonelelo kuloo mibutho.
Njengoko kuchaziwe nguNanno, iZizwe eziManyeneyo i-GLOBE inomdla kakhulu. Ayililo iQela leziXhobo zabaSebenzi eliqhelekileyo njengaleyo ifunyanwa kwiinkampani ezininzi ezenza ingeniso kwihlabathi liphela eliphuhlileyo. Isebenza ngokuzithandela ngokupheleleyo kunye ne-ZERO mali evela kwiZizwe eziManyeneyo okanye nayiphi na imibutho engama-70. Kukukhokela kwabasebenzi, kulawulwa, kunye nombutho ozixhasa ngemali. Isebenza ndawo phakathi kweqela lezixhobo zomsebenzi kunye nomanyano wabasebenzi.
Nangaliphi na ixesha kukho ingxoxo ngomgaqo-nkqubo wezabasebenzi okanye izibonelelo kuyo nayiphi na imibutho engama-70 ye-UN, i-UN GLOBE ifuna isihlalo etafileni ukuqinisekisa inzuzo yabo bonke abasebenzi. LGBTAbasebenzi be-Q bayathethathelwa, bahlala bexhamla noogxa babo abaqhelekileyo. Ukuba yintlangano yehlabathi lonke kuzise imiceli mngeni emininzi. Umzekelo, xa umntu osebenza naye enikwa isithuba kwilizwe elingelilo LGBTU-Q + ulungile okanye ulwaphulo-mthetho kwilizwe elinokubakho, zeziphi iindlela i-UN enokufikelela kuzo. Kwezinye iimeko, ukuba umqeshwa ukhetha ukungathathi isabelo kunokuba yinto enokukhethwa ngumsebenzi. Sonke sinokhetho olunzima ekufuneka silwenzile, kodwa ukuhlala njengesiqinisekiso sokwenene ngokukhuselekileyo kangangoko kunokwenzeka yeyona ndlela ilungileyo. Kuya kubakho amanye amathuba okuqhubela phambili ngomsebenzi kwixa elizayo.
Ndinomdla kule modeli kwaye ndiziva ngathi inokuba lukhuthazo kwabanye. Nokuba uthenge ntoni umqeshi, cwangcisa, ufundise, uqhagamshele, kwaye wenze utshintsho kwimeko yakho. Eyakho kunye ne-UN Globe ziyakhuthaza.
Ndijoyine kunye noNanoo kwi-OutBüro, the LGBTI-Q yobungcali kunye nosomashishini uthungelwano loluntu kwi-intanethi yamafanasini, abathandana nabesini esinye, abesini esahlukileyo, abaguquli, abelungu, amahlakani, kunye nabaqeshi bethu abaxhasayo LGBTQ ukwamkela izibonelelo ezijolise ekulinganeni emsebenzini, imigaqo-nkqubo kunye nezenzo zeshishini. https://www.OutBuro.com
tags: Ukwahlukana, Ukwahluka kunye nokubandakanywa, LGBTQ Abasebenzi, LGBTQ Abasebenzi, I-UN GLOBE, amazwe adbeneyo, IZizwe eziManyeneyo GLOBE
Julayi 17, 2021 (Ihlaziywe ngoJulayi 17, 2021) E papashwe ngu UDennis Velco
Kule ngqungquthela yeeVoBoro Voices ezibandakanya LGBTIingcali ze-Q, oosomashishini, kunye neenkokheli zoluntu kwihlabathi liphela, bamba izingxoxo zikaDennis Velco noJennifer Henius kunye nabasunguli bakaZander Keig LGBTQ Iziko Lononophelo.
UJennifer unembali ende yokusebenza kwindawo yokhathalelo kwikomkhulu lesizwe le-US Veterans Affairs apho wayekwindima yobunkokeli kwinkqubo yenkxaso yomkhathaleli. Kule ndima, usebenze kwimigaqo-nkqubo yoluntu kubandakanya LGBTQ umgaqo-nkqubo kunye nemfundo yabanonopheli kunye noqeqesho kwikharityhulam apho wayesebenzela ukuhlanganisa LGBTUlwazi ngoQ kunye nobuntununtunu kwikharityhulam yoqeqesho. Unontlalontle onelayisensi kwezonyango kunye nomcebisi kwezempilo.
UZander noJennifer baqala ukudibana nge-LinkedIn kwaye kungekudala baqonda umdla wabo oqhelekileyo. Njengoko kugqityiwe kudliwanondlebe lwethu noZander, saxoxa ngamava akhe asemkhosini, kunye nomsebenzi wakhe wexesha elidlulileyo nakwiMicimbi Yezomkhosi yaseMelika. Bobabini uJennifer noZander ngabanonopheli bamalungu osapho abangooMkhosi baseMelika.
The LGBTIZiko loKhathalelo le-Q libonelela ngezixhobo, imfundo kunye neenkonzo zokuxhobisa LGBTQ Abanonopheli kunye nabo babakhathaleleyo LGBTAbantu be-Q ukuphucula impilo yabo, impilo yabo yengqondo, kunye nokuba sempilweni kwabo. Inkqubo ye- LGBTIZiko loNonophelo laseQ lisungulwe kwaye lakhokelwa ngabantu abathandana nabasetyhini, abathandana besini esinye, abesini esahlukileyo, abaguquli, kunye nabazimeleyo, abameli kunye namahlakani. Ukunyamekela yinkxalabo enkulu yezempilo yoluntu echaphazela abantu abadala abangaphezu kwezigidi ezingama-53 e-USA. Ukunyamekela kuqheleke kakhulu phakathi LGBTQ ngabanye kune-cisgender okanye abantu abadala abathandanayo. Ukunyamekela kunokunyanzela ngokwasemzimbeni, ngokwengqondo, ngokweemvakalelo nangokwezimali. Ukugcina impilo yakho nokuba sempilweni kubalulekile.
Umsebenzi wabo kukwazisa ngemiceli mngeni eyodwa abajongana nayo LGBTQ Abanonopheli kunye nabo babakhathaleleyo LGBTQ umntu ngamnye, amandla LGBTQ Abanakekeli ukuba baphile ngokuzingca nangesidima, kwaye basebenze njengomjelo wemfundo, intlalontle, uqeqesho kunye nophando. Iziko libonelela ngolwazi kunye nezixhobo, lihambisa uqeqesho kunye neenkonzo ezintsha zokuphucula impilo kunye nokuba sempilweni LGBTQ Abanakekeli.
Funda ngakumbi kwi-https: //lgbtqcaregivers.org/
UJennifer wabelana ngezifundo zangaphambili ezingakhange zibandakanyeke kodwa kutshanje imibutho eqhuba izifundo ibonile isidingo sokubandakanya ngokupheleleyo kwaye ngoku ithatha amanyathelo amakhulu okubandakanya LGBTQ uluntu. Ukongeza, amalungu ebhodi yeengcebiso LGBTIziko labaNonopheli be-Q ngoogqirha abaziingcali LGBTUkwahluka kwezonyango.
Sincokola ngezinye zeemfuno ezizodwa ze LGBTQ abakhathaleli abanjengokuba kufuneka babe ngumongi womntu obathandayo ongabamkeliyo ukuba bangobani. UZander wabelane ngemeko yakhe yokukhathalela utata wakhe onesifo sengqondo esixhalabisayo nanjengomntu oguqukayo ekufuneka abelane ngolwazi lakhe kunye nabasebenzi kwiziko lokuhlala elinoncedo xa utata wakhe eqala ukubuza malunga nentombi yakhe.
UJennifer wabelana ukuba zingaphi LGBTQ abadala abafuna uncedo ekhayeni okanye kumaziko ononophelo bahlala bebuyela egumbini kuba besoyika ucalucalulo, ukungcungcuthekiswa, kunye nokwaliwa kukhathalelo. Sixoxe ngesidingo se LGBTQ uqeqesho kunye nokuqinisekiswa kwale mibutho.
Qiniseka ukuba ujonge amalungelo akho oMkhathaleli: https://www.caregiver.org/resource/caregivers-bill-rights/
Ukuqhagamshela noZander kumfumane kwi-OutBüro apha. https://outburo.com/profile/zanderkeig/
Joyina mna noBruce kwi-OutBüro, the LGBTI-Q yobungcali kunye nosomashishini uthungelwano loluntu kwi-intanethi yamafanasini, abathandana nabesini esinye, abesini esahlukileyo, abaguquli, abelungu, amahlakani, kunye nabaqeshi bethu abaxhasayo LGBTQ ukwamkela izibonelelo ezijolise ekulinganeni emsebenzini, imigaqo-nkqubo kunye nezenzo zeshishini. https://www.OutBuro.com
Udidi: yezehlo, impilo, Resources
tags: Umkhathaleli, Isixhobo soMkhathaleli, Inkxaso yoMkhathaleli, Ukunyamekela, LGBTQ uMongi, LGBTQ Ukunyamekela
Julayi 16, 2021 (Ihlaziywe ngoJulayi 16, 2021) E papashwe ngu UDennis Velco
Kule ngqungquthela yeeVoBoro Voices ezibandakanya LGBTIingcali ze-Q, oosomashishini, kunye neenkokheli zoluntu kwihlabathi liphela, bamba izingxoxo zikaDennis Velco noRichard LeMay. Ungumvelisi olawulayo, umlawuli, umbhali wesikrini, umyaleli wokubhala, umlingisi kunye nombhali.
Ukuba unemibuzo okanye uluvo ngoRichard okanye uDennis, nceda ubongeze kumagqabantshintshi.
Umsebenzi kaRichard waqala njengengcali yomzimba. Umsebenzi wakhe wangoku waqala xa wafunyanwa kwaye wacelwa ukuba abekho kwezinye iintengiso. Wenze ezininzi LGBTIifilimu ze-Q, ikakhulu ezithi "Abantwana bakaThixo" awazivelisayo. Yaqhubeka ukuphumelela amabhaso omnyhadala wefilimu wamanye amazwe angama-27. Enye into enkulu LGBTIfilimu ye-Q ayibhalileyo, wayivelisa, kwaye wayikhokelela "Kuze njengoko sasiza" enokuthi ngoku ibukelwe kwi-Prime Prime yaseAmazon, eHulu nakwezinye iinkonzo zokusasaza. Bukela okanye umamele incoko ukuva uphononongo lukaDennis kunye neengcebiso "Zize njengoko sifikile".
Ezinye izihloko zefilimu ngoku kwi-Prime Prime yaseAmazon zibandakanya "Umoya ovuthuzayo", "amaMelika angama-200", kunye neGazi eliDibeneyo ". Wayengumlawuli wokuphinda enze kwakhona inkampani yokuqala kaFrancis Ford Coppola "iDementia 13" yeUniversal, okwangoku kwiAmazon Prime.
Qhagamshela kwiprofayili yakhe kwi-IMDb: https://www.imdb.com/name/nm0501165/
Nxibelelana noRichard kwi-OutBüro: https://outburo.com/profile/richardlemay/
Sincokola malunga nokuba uloyiko lokucela uncedo lunokukubamba njani kwikhondo lakho lomsebenzi. Wafunda ngokwenza iindima ezininzi ekwenzeni ifilimu. Ngokwenza njalo unokuqonda kwazo zonke iindima kunye nenkqubo. Kwiiprojekthi, uRichard uvulelekile ekuqwalaseleni izimvo ezivela kwabanye. Njengomlawuli wefilimu, ufuna esona siphumo siphezulu kwaye kufuneka enze izigqibo kwangexesha. Njengoko esitsho, "olona luvo luphumeleleyo".
Inoveli yokuqala kaRichard "Yonke iNdlela eya eWrightsville" libali elizayo. Ngubani othi awukwazi ukubaleka iingxaki zakho? U-Pete oneminyaka engamashumi amabini ananye uceba ukwenza kanye loo nto: ebalekela ikhola yakhe eluhlaza okwesibhakabhaka, ukukhuliswa eMassachusetts, imicimbi yakhe yomsindo, kwaye okona kubaluleke kakhulu, nguJackson, iwele lakhe elongamileyo. Kwaye ngelixa esenza njalo, uya kuthatha imfihlo yakhe enzulu. Umfundi ophumelele ikholeji kutshanje, uPete uya eNorth Carolina ukuqala umsebenzi wakhe omtsha kunye nobomi bakhe obutsha. Emva kweminyaka ethelekiswa newele lakhe elinobuntu nelithandekayo, kufuneka azenzele eyakhe kwaye angabonwa njengo "onomsindo" okanye "Umntakwabo Jackson." Into ayifumanayo ikwayingxaki efanayo ebisoloko imbambile. Kuze kube yilapho ethandana nomqeshi wakhe, otshatileyo kunye nabantwana ababini.
Into eqala ukuzaliseka kwephupha iqala ukuthatha umjikelo omnyama, de uJackson abonakale eNorth Carolina ukuya-kwakhona kwakhona-ukuphakamisa ubomi bukaPete. Nangona iinjongo zikaJackson zimsulwa, uncedo lwakhe alunankathalo. Ukhupha uPete ngaphandle kwekhabethe kwaye azame konke okusemandleni akhe ukumkhomba kwicala lothando lokwenene. Ukuhlekisa ngokukhohlakeleyo, ukuthandana, kunye nokuchukumisa ngokunzulu, YONKE INDLELA YOKUYA KWI-WRIGHTSVILLE libali lendoda enye yokuzifumana… kwaye mhlawumbi nothando lokwenene apha endleleni.
Joyina mna noRichard kwi-OutBüro, the LGBTI-Q yobungcali kunye nosomashishini uthungelwano loluntu kwi-intanethi yamafanasini, abathandana nabesini esinye, abesini esahlukileyo, abaguquli, abelungu, amahlakani, kunye nabaqeshi bethu abaxhasayo LGBTQ ukwamkela izibonelelo ezijolise ekulinganeni emsebenzini, imigaqo-nkqubo kunye nezenzo zeshishini. https://www.OutBuro.com
Udidi: BuGcisa, yezehlo
tags: Umvelisi oLawulayo, Umbhali onguGay, UMlawuli we-Gay, Umenzi wefilimu waseGay, Iifilimu zeGay, Iinoveli zeGay, URichard LeMay, Umbhali wesikrini
Julayi 15, 2021 (Ihlaziywe ngoJulayi 15, 2021) E papashwe ngu UDennis Velco
Kule ngqungquthela yeeVoBoro Voices ezibandakanya LGBTIingcali ze-Q, oosomashishini, kunye neenkokheli zabahlali kwihlabathi liphela, bamba izingxoxo zikaDennis Velco noTeresa Norris kunye no-Anthony Lombardi ovela kwi-HPV Global Action engenzi nzuzo. Qiniseka ukuba umamele okanye ubukele esi siqendu sipakishwe sigcwele lulwazi olukhulu.
UTeresa waseka i-HPV Global Action engenzi nzuzo ngo-2002 emva kokubulawa komhlobo wakhe osenyongweni ngumhlaza womlomo wesibeleko kunyaka ongaphambili. Kwakungekho kwaziswa kangako nge-HPV kwaye uTeresa watshintsha izicwangciso zakhe zomsebenzi ukubonelela ngolwazi kunye nokwazisa nge-HPV (papillomavirus yabantu). Umbutho usekwe eMontreal Canada kunye namalungu eqela kwamanye amazwe. ECanada, i-HPV yeHlabathi yeNtsebenzo ibaluleke kakhulu ekuboneleleni ngolwazi lwezesondo kunye nokuzala ngolwazi ngendlela yokuziphatha ngokwesondo kunye nokubandakanya ubungqina obusekwe kubungqina. UTeresa kunye neqela bahamba ngeenxa zonke kwihlabathi ukuqhuba uqeqesho oluqala kubantwana abaneminyaka eli-12 ukuya kubasebenzi bezempilo ekwabelaneni ngeenkqubo kunye neendlela ezilungileyo. U-Anthony wayenemfundo enamakhondo kwaye ngoku uhlala eYurophu. Emva kokudibana noTeresa, bakha intsebenziswano.
U-Anthoney wabandakanyeka ngakumbi ngokuzinikela kwi-HPV Global kwaye emva koko wamkela indima yakhe yangoku njengeGosa eliyiNtloko lokuSebenza.
Kukho iintlobo ezingaphezu kwe-180 ze-HPV. Ngaphezulu kweentlobo ezingama-40 zixhaphakile kwaye zinokubangela umhlaza ohlukeneyo o-9 kunye neemfazwe zangasese. Umhlaza ubandakanya i-tonsil, intambo yezwi, ulwimi, umqala, i-anal, ipenisi, ubufazi, ubufazi, kunye nomlomo wesibeleko. Ngaphezulu kwe-75% yabo bonke abantu kwihlabathi liphela baya kuthi banesivumelwano okungenani esinye seHPV ebomini babo. I-HPV idluliselwa ngonxibelelwano lolusu nolusu ngaphakathi kwenkunkuma (isuti yokuhlamba). Ayifuni ukuba neentlobano zesini ngokupheleleyo njengezinye izifo ezidluliselwa ngesondo. Iikhondom azikhuseli ekufumaneni i-HPV.
Abantu abane-vaginas banokufumana uvavanyo lwe-HPV njengenxalenye yovavanyo lwabo lwempilo yomlomo wesibeleko ngovavanyo oluthile lwe-HPV. Ngelishwa, akukho luvavanyo lwe-HPV kubantu abaneepenise. I-HPV ihlala kwiseli ngaphakathi kwendawo ye-pelvis. Azihambi ngegazi njengezinye iintsholongwane. Umzimba awenzi anti-imizimba yiyo loo nto kuvavanywa abantu abanamalungu obudoda. Ekuphela kwendlela abaya kwazi ngayo ukuba bane-HPV kukuba babonisa iimpawu zayo ezifana neentsumpa zangasese (ezinokuba semlonyeni) okanye banenye yomhlaza we-9 onxulumene ne-HPV. I-HPV inokuhlala ilele emzimbeni kangangesithuba seminyaka engama-40 kwaye iimpawu zinokuthi nangaliphi na ixesha emva kosulelo. Umntu angayithumela i-HPV ngaphandle kokubonisa iimpawu okanye iimpawu.
Ukugonywa kwe-HPV sisitshixo sokuthintela i-HPV kunye nomhlaza onxulumene nayo. Kugxilwe ekuboneleleni ngezitofu ze-HPV kulutsha ngaphambi kwemisebenzi yesondo. Nangona kunjalo, akukho mda wobudala ungaphezulu ukuze nabani na nangaliphi na ixesha afumane iyeza lokuthintela ukuthintela ukufunyanwa kwe-HPV kwixa elizayo. Ukugonywa kwe-HPV sisixhobo sokuthintela umhlaza. Uninzi lwezicwangciso zeinshurensi yezempilo ziya kuhlawula iindleko.
Sijoyine kwi-OutBüro, the LGBTI-Q yobungcali kunye nosomashishini uthungelwano loluntu kwi-intanethi yamafanasini, abathandana nabesini esinye, abesini esahlukileyo, abaguquli, abelungu, amahlakani, kunye nabaqeshi bethu abaxhasayo LGBTQ ukwamkela indawo yokusebenzela egxile ekulinganeni, imigaqo-nkqubo, kunye neendlela zeshishini. https://www.OutBuro.com Ngaba ungathanda ukuboniswa ngoluhlobo?
Nxibelelana nomninimzi uDennis Velco. https://outburo.com/profile/dennisvelco/
Udidi: yezehlo, impilo
tags: Umhlaza wokuhlaziya, Uthintelo lomhlaza, Ngomhlaza wesibeleko, HPV, Isenzo seHlabathi seHPV, Ubhubhane weHPV, Ukugonywa kwe-HPV, Isitofu sokugonya seHPV, Umhlaza wePenis, Umhlaza weTroat, Umhlaza weetoni, Umhlaza weCord Cord
Julayi 13, 2021 (Ihlaziywe ngoJulayi 13, 2021) E papashwe ngu UDennis Velco
Kule ngqungquthela yeeVoBoro Voices ezibandakanya LGBTIingcali ze-Q, oosomashishini, kunye neenkokheli zabahlali kwihlabathi liphela, bamba izingxoxo zikaDennis Velco noCurtis Danskin-Ainslie: Ukunceda oosomashishini nabaNcedisi abaQinisekileyo kunye noQeqesho lweNjongo yoBomi.
Kule ncoko iphilileyo, evulekileyo, neqinisekileyo, sigubungela kancinci-ke qiniseka ukuba umamele.
UCurtis waqala ikhondo lakhe kwezomculo njengomlawuli wecawe. Wahlala ecinezela ubuqu bakhe ukuze afanele ukutshata oyena mhlobo wakhe ubalaseleyo. Uphume njengongqingili eneminyaka engama-42 ubudala. Waqala ishishini lokuncedisa ngokubonakalayo ukunceda abanye oosomashishini ukuba bagxile ekuqhubeni nasekukhuliseni ishishini labo lithatha imisebenzi emininzi ese-ofisini yabathengi. Ukwabonelela ngoqeqesho lwabarhwebi. Uneekhontraktha ezininzi ezinezakhono ezahlukeneyo e-US athi azisebenzise ukuxhasa oosomashishini kwiinkalo ezininzi zeshishini labo. Oosomashishini ngokwesiqhelo abalunganga kuzo zonke iinkalo zokuqhuba ishishini. I-OCR eyiyo ivumela abanini bamashishini ukuba bongeze uncedo lokongeza. Iipesenti ezingama-72 zamashishini amancinci asilele kwiminyaka emi-3 yokuqala bezama ukuzenzela yonke into. Rhoqo, abanini bamashishini abancinci baya kujonga indleko yokufumana uncedo ukusilela ukuqonda ukuqesha umntu oyingcali kuloo misebenzi angayenza ngcono kwaye ikhulule umnini-shishini ukuba agxile ekukhuleni kwabathengi / kwabaxhasi. UCurtis uthi makuziswe inkxaso xa uziva ngathi zonke izinto ziyaphambana. Banokunceda ukunika umnini-shishini isiqabu.
Kubomi bakhe bokuqeqesha, unceda abantu ukuba bafumane indawo yabo emhlabeni. Njengomlungiseleli omiselweyo, kwaye ebehlala egumbini iminyaka emininzi, uyazi ukuba uziva njani kwaye uzama ukudibanisa ukholo kunye nokuzazisa. Kubomi bakhe bokuqeqesha, ujolise ekuncedeni LGBTAbantu be-Q + beza ngokwemeko yokulahlwa okwenzekileyo kunqulo kunye nomothuko. UC Curtis ukholelwa ekubeni okwenzekayo kuthi kuyasibumba kwaye singabeka izinto zexesha elidlulileyo kwindawo yokujonga kwaye sifumane amandla kuyo ukuze sikhule kwaye siphumelele. Sancokola ngokubeka imida nabanye kwaye siphila ngokuzithanda.
Ukuqhagamshela noCurtis kumfumana kwi-OutBüro apha. https://outburo.com/profile/orcvirtual/
Joyina iQela likaCurtis kwi-OutBüro ebizwa ngokuba yiNkxaso yeNkxaso yeNgqono yoShishino: https://outburo.com/community/groups/entrepreneurial-mindset-support/
Joyina mna kunye noCurtis kwi-OutBüro, the LGBTI-Q yobungcali kunye nosomashishini uthungelwano loluntu kwi-intanethi yamafanasini, abathandana nabesini esinye, abesini esahlukileyo, abaguquli, abelungu, amahlakani, kunye nabaqeshi bethu abaxhasayo LGBTQ ukwamkela izibonelelo ezijolise ekulinganeni emsebenzini, imigaqo-nkqubo kunye nezenzo zeshishini. https://www.OutBuro.com
Udidi: yezehlo, UkuKhutshwa koBuntu, Startups
tags: Ndiyaphuma, LGBTQ Umqeqeshi, LGBTQ Uluntu, LGBTQ Oosomashishini, Umqeqeshi weNjongo yoBomi, I-OCR eyiyo, Ukoyisa ukugatywa kosapho, Ukoyisa ukungamkelwa kweNkolo
Julayi 12, 2021 (Ihlaziywe ngoJulayi 12, 2021) E papashwe ngu UDennis Velco
Kule ngqungquthela yeeVoBoro Voices ezibandakanya LGBTIingcali ze-Q, oosomashishini, kunye neenkokheli zoluntu ezivela kwihlabathi liphela, bamba izingxoxo zikaDennis Velco noJennifer noStephanie woVuso lokuVusa-bangabahlobo bobudlelwane obupheleleyo.
Mamela ngaphakathi ukuze ufunde okungakumbi. UJennifer noStephanie bashushu, bavulekile, kwaye banika isibini esenza ukuba nabani na azive ekhululekile kwaye ekhuselekile kwangoko. UJennifer noStephanie bobabini banemisebenzi emininzi yokusebenzela abanye. UStephanie kudala engunontlalontle egxile ekuxhaseni amaxhoba ngelixa uJennifer, kunye nomsebenzi wakhe wexesha elidlulileyo kunye nemfundo kwizengqondo, kutshanje waba ngumlungiseleli omiselweyo. Bathathe ixesha labo elidlulileyo kwaye bakha ngamandla abo bawaxuba ngamava abo obudlelane bobuqu njengesibini ukwenza iAnchanted Awakenings njengabaqeqeshi bobudlelwane.
Kwingxoxo yethu, bayacacisa ukuba bayabaxhasa abathengi kulo lonke ulwalamano lwalo naluphi na uhlobo, nawe, ubuhlobo, ubungcali, usapho, kunye nolwalamano lwenene. Bacinezela ukuba olona lwalamano lubalulekileyo lukhona kunye nawe kuqala. Ukuba nobudlelwane obuhle kunye nawe kukuvumela ukuba uvuleke kwaye ubekhona kubudlelwane nabanye. Bajolise kwingqondo, emzimbeni nasemphefumlweni bencedisa abathengi ukuba baxobule umaleko wokuphila ukuze baphile ubomi babo obupheleleyo kwaye buyinyani kwaye njengoko kufuneka imida emiselweyo yokuqinisekisa unxibelelwano oluhloniphekileyo nabanye.
Ngaba igama elipheleleyo ngokukhawuleza likwenza ukuba ucinge ngoooooo izinto ezifana nokutshisa isiqhumiso, imiqamelo emininzi, kunye nelaphu ledayi? Kwingxoxo yethu, sixoxa malunga nesayensi yezinto ezibangela ukwenzakala, ubuchwephesha be-quantum, imagnethi yomhlaba, i-neuroplasticity, ukusebenza kwengqondo, kunye neeseli ze-neuron entliziyweni. Konke oku kudibene nesikhokelo sabo sobuchwephesha ukunceda abanye baphile ubomi obutyebileyo nobuzalisekileyo bokuthanda kuqala kwaye uzihloniphe kwaye uvuleleke kwabanye ngelixa ugcina wena kuqala.
Mamela kwindlela uJennifer noStephanie abalusebenzisa ngayo ulwimi lwendalo ukuze babelane ngalo xa abanye ngokungazi benyathela kwimithwalo yeemvakalelo zangaphambili kunye nendlela abayisebenzisa ngayo ukwandisa ukuzifumanisa kwabo kunye nokwenza nzulu ubudlelwane babo ngokweemvakalelo. UJennifer noStephanie basebenza nabantu kunye nezibini ezibonelela ngokwabelana kunye nokwabelana ngamaqela. Banikela ngeeseshoni ezenziwa simahla ngeveki ngeqela le-Facebook kwaye kutshanje baqala iqela ku-https: //outburo.com.
Nalu unxibelelwano kwiqela: https://outburo.com/community/groups/out-relationships-2/
Ndijoyine, uJennifer noStephanie kwi-OutBüro, the LGBTI-Q yobungcali kunye nosomashishini uthungelwano loluntu kwi-intanethi yamafanasini, abathandana nabesini esinye, abesini esahlukileyo, abaguquli, abelungu, amahlakani, kunye nabaqeshi bethu abaxhasayo LGBTQ ekwamkeleni ukulingana okujolise emsebenzini, imigaqo-nkqubo, kunye neendlela zeshishini. https://www.OutBuro.com Ngaba ungathanda ukuboniswa ngoluhlobo?
Udidi: yezehlo, UkuKhutshwa koBuntu
tags: Ukuvuswa kobugqi, Umqeqeshi wobudlelwane obuBanzi, LGBTQ Umqeqeshi wobudlelwane, Ulwalamano Umqeqeshi
Julayi 11, 2021 (Ihlaziywe ngoJulayi 11, 2021) E papashwe ngu UDennis Velco
Kule ngqungquthela yeeVoBoro Voices ezibandakanya LGBTIingcali ze-Q, oosomashishini, kunye neenkokheli zoluntu kwihlabathi liphela, bamba izingxoxo zikaDennis Velco no-Ella Slade LGBTQ + iNkokeli yeHlabathi kwi-IBM. Sixoxa ngokugqityiweyo kutsha nje LGBTQ + Ukuzabalazela ingxelo eyiyo ye-IBM ngenkxaso evela LGBTImibutho ye-Q + ngaphandle kunye nokulingana kunye nokuziqhenya emsebenzini (ikhonkco elingezantsi). Qiniseka ukuba uyayibukela okanye uyimamele le ncoko iphilayo kwaye inengqiqo.
U-Ella waqala ikhondo lakhe kwi-IBM okokuqala njengomfundi wasekholejini osebenza kwintengiso yokugaya egubungela iYurophu. Baye bathatha inxaxheba enkulu kwi- LGBTQ + kwaye babesebenza kwi-IBM LGBTQ + iqela lezixhobo zabasebenzi. Babethanda inkcubeko ye-IBM kwaye babekwazi ukubuyela kwi-IBM emva kokugqiba isidanga sabo sokungena kwiqela lokugaya abantu kwihlabathi liphela. Ngaphakathi kwendima, baqala ukugxila kuyantlukwano kwindawo yayo ebonakalayo kodwa benomdla omkhulu kuyo LGBTQ + italente. U-Ella ukhokele phambili ekufumaneni i-IBM ebandakanyeka kwiNyanga yokuzikhukhumeza ukuthengisa amathuba emisebenzi. Ngokwenza njalo, uElla wabona umsebenzi wabo wamaphupha abawubambayo ngoku. Baxhasa bonke LGBTImiba ye-Q + kunye namaqela e-IBM kwihlabathi liphela. Mamela kwinkcazo yabo epheleleyo.
Qhagamshela kwingxelo epheleleyo (okanye ucofe ilogo ye-IBM): https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/report/lgbt-ukubandakanya
Ekudaleni ifayile ye- LGBTQ + Ukuzama ingxelo yokuNgqinisisa, i-IBM yenze uphando kunye nejam. U-Ella ucacisa ukuba i-jam ifana nejam yomculo apho iimvumi zidlala izixhobo zazo kwaye ngenxa yesiphithiphithi, kuvela ingoma emnandi. Kuthatha loo mbono kwaye uyisebenzise kwezinye izinto. Le jam yayiyiforamu ehamba phambili kwi-intanethi enemisonto eyahlukeneyo kubandakanya abantu abavela kwihlabathi liphela ngaphezulu kwexesha le-34. Inike inqanaba elinzulu lokuqonda okungqinelanayo kunye nesaveyi.
Ingxelo iqinisekisa ukuba loluphi olunye uphononongo oluye lwabonisa ukuba i-45% yabasebenzi be-LGB bajongene nocalucalulo kwisini. Oku kudityaniswe ne-46% kuphela LGBTQ + abasebenzi baphangele emsebenzini. I-9% yabo bonke abathathi-nxaxheba beJam bayazisile ukuba abamele ubunyani babo emsebenzini. I-65% yabaphenduli be-LGB baziva ukuba kufuneka basebenze nzima kunabo basebenza nabo ukuze baphumelele. ubhubhane we-COVID-19 ubeke umthwalo omkhulu kubantu abakhathalela i-LGB. I-43% yabaphenduli be-LGB bathi bazabalazile ukulinganisa ukusebenza ekhaya kunye nokukhathalela amanye amalungu osapho, xa kuthelekiswa ne-34% yabantu abangengabo i-LGB. Ngaphezulu kwesibini kwisithathu sabantu be-LGB bathi abaziva bexhotyisiwe ukoyisa imiceli mngeni yobuchwephesha, ethetha ngemfuno yenkxaso eyomeleleyo kunye neenethiwekhi zoncedo. Le ngxelo ibonelela ngezenzo ezicacileyo ezinokuthi zenziwe ngabaqeshi ukukhuthaza inkcubeko yokusebenza ebandakanya wonke umntu ethi izuze bonke abasebenzi. Oku kubandakanya imigaqo-nkqubo, izibonelelo, uqeqesho lwabasebenzi, ukusebenzisa ulwimi olubandakanya wonke umntu, ukusebenzisa izimelabizo ozikhethileyo, nokusebenzisa uphawu kakuhle.
Ndijoyine kunye no-Ella kwi-OutBüro, the LGBTI-Q yobungcali kunye nosomashishini uthungelwano loluntu kwi-intanethi yamafanasini, abathandana nabesini esinye, abesini esahlukileyo, abaguquli, abelungu, amahlakani, kunye nabaqeshi bethu abaxhasayo LGBTQ ekwamkeleni ukulingana okujolise emsebenzini, imigaqo-nkqubo, kunye neendlela zeshishini. https://www.OutBuro.com
Udidi: Ukwahluka kunye neNdaba yokuFakwa, yezehlo
tags: IBM, LGBTQ Ukubandakanywa, LGBTQ Ukulingana emsebenzini, LGBTQ + Ukuzama ukunyaniseka, Ngaphandle nangokulinganayo, Ucalucalulo emsebenzini, Ukulingana emsebenzini, Ukuziqhenya emsebenzini
Julayi 10, 2021 (Ihlaziywe ngoJulayi 10, 2021) E papashwe ngu UDennis Velco
Kule ngqungquthela yeeVoBoro Voices ezibandakanya LGBTIingcali ze-Q, oosomashishini, kunye neenkokheli zoluntu kwihlabathi liphela, bamba izingxoxo zikaDennis Velco noMichel Grey, umqeqeshi wobomi bokomoya opheleleyo LGBTUluntu lwase-Q kunye namahlakani amakhulu.
UMichel yingcali engeyiyo eyamabakala enamava edlulileyo njengomqeqeshi webhola ekhatywayo yolutsha kwaye wayehlala engumntu oxhomekeke kwabanye kwiingcebiso. Njengosomashishini, uthatha umngcipheko kuwe nangezimvo zakho. Ukufumana inkxaso kubaluleke kakhulu. UMichel ukholelwa, njengam, ukuba ukucinga okuqinisekileyo akwanele. Oko ucinga ngako uzisa. NgokukaMichel, bathanda ukunceda abantu baphonononge ubumnyama babo kwaye bazise ekukhanyeni. Zithini iinkolelo zabo ezimbi, zavela njani, zikukhusela njani kwaye zikubambezela ekubeni ngumntu opheleleyo. UMichel unceda abathengi ukuba bafike kwingcambu yeenkolelo zabo. Emva koko xobula ezo nkolelo zingasebenzi kakuhle kwaye wakhe iinkolelo ezintsha ezivumela umntu lowo ukuba akhule abe ngumntu opheleleyo. Banceda abathengi ukuba bamkele into elungileyo edla ngokuchaswa ngenxa yokuthuthuzela kokungakhathali okudlulileyo.
Abaqeqeshi bobomi abangabo abacebisi bezempilo yengqondo nangona banokuba sisixhobo sokukunceda ujonge iimeko ngombono ojolise kuzo. Ndiyakholelwa ngentliziyo iphela ukuba ukufuna ingcebiso yendalo kumcebisi oyingcali linyathelo elilungileyo. Inokubonelela ngezinye izimvo kunye nokuqonda kuthi ngokwethu esinokungakuboni kwaye kunokusinceda emsebenzini wethu ngobomi okanye umqeqeshi weshishini.
UMichel unceda abathengi ukuba bafumane into abafuna ukuyenza ngobomi babo kunye / okanye bafumane isibindi sokulandela into abafuna ukuyenza ngokuchaza ukuba bangobani kwaye bafuna ntoni. Banceda abathengi bafunde ukuba sele bexabisekile, bethandeka, bexabisekile kwaye beshenxa kwizenzo ezizama ukufuna ukuvunywa kwabanye bazi ukuba bangobani kwaye bangabanini kwaye baqhubela phambili ukusuka kwindawo yokuziva befanelekile, ukuzithanda kwabo, kwaye Ixabiso labo lokuzixabisa kunye nokwenza izinto ukufezekisa eyona nto bayifunayo ukuthengisa iivesi kwisiseko sokufuna ukuvunywa kwabanye.
UMichel unceda abathengi baqonde ngaphezulu kokumiselwa kweenjongo, banceda bafikelele kwiimvakalelo zokuba abathengi bafuna ukufikelela phi. Iimvakalelo zingumqhubi omkhulu ebomini. Xa ulungelelanisa iimvakalelo zakho nezenzo zakho uyakwazi ukufeza okuninzi kuba wonwabile, unomdla kwaye uziva ulungile malunga nento oyenzayo.
Abathengi bahlala befuna uncedo kuMichel ngemicimbi yokudinwa, impilo, umsebenzi / ikhondo, ubudlelwane bobuchwephesha kunye nobobuqu. Kutshanje ngenxa yemicimbi yobudlelwane be-COVID ibe yinto enkulu ukusukela oko abantu banyanzelwa ukuba babe kunye ngakumbi kwaye kuvavanya amandla abo angaphambili. Ukuze ufumane nantoni na ebomini bakho, kufuneka uzive ufanelekile. Lumka xa izinto zingasebenzi yibhulorho yokucaca kokukusa kule nto uyifunayo kwaye uyifanele.
Ukuqhagamshela noMichel ubafumane kwi-OutBüro apha. https://outburo.com/profile/michelgrey/ Ndidibanise noMechel kwi-OutBüro, the LGBTI-Q yobungcali kunye nosomashishini uthungelwano loluntu kwi-intanethi yamafanasini, abathandana nabesini esinye, abesini esahlukileyo, abaguquli, abelungu, amahlakani, kunye nabaqeshi bethu abaxhasayo LGBTQ ukwamkela ukulingana emsebenzini kujolise kwizibonelelo, imigaqo-nkqubo, kunye neendlela zeshishini. https://OutBuro.com
tags: Umqeqeshi woBomi oBanzi, Coach Life, UMichel Grey, Akukho Binary, Umqeqeshi woBomi boMoya
Julayi 5, 2021 (Ihlaziywe ngoJulayi 5, 2021) E papashwe ngu UDennis Velco
Kule ngqungquthela yeeVoBoro Voices ezibandakanya LGBTIingcali ze-Q, oosomashishini, kunye neenkokheli zoluntu kwihlabathi liphela, bamba izingxoxo zikaDennis Velco noBob Witeck, ilivo LGBTIndawo yokuthengisa. Waseka eyokuqala LGBTQ ukuthengisa arhente yonxibelelwano ukunceda iimveliso ukunxibelelana nabantu abathandanayo, abathandanayo, abesilisa nabasetyhini, abaguquli, kunye noluntu lwaseburhulumenteni.
UBob wakhulela kwindawo yaseWashington DC. Kwiminyaka eli-10 wayenguNobhala we-Press kwi-Senator yase-US. Emva kwexesha lakhe apho waba usekela-mongameli weqonga lonxibelelwano lwehlabathi. Nduli + uKnowlton. Wayekhuthele njengevolontiya kwi #gay, #lesbian, #bisexual, #transgender, kunye #queer yoluntu. Wayehlala ekholelwa ukuba amashishini angamadlelane endalo LGBTQ + yoluntu kwaye yafuna ukuvala ukuthanda kwakhe i LGBTQ + yoluntu ngezakhono zakhe kunye nobomi bobuchule.
Yena nomhlobo olungileyo baqalisa iWiteck + Combs ngo-1993. Umthengi wabo wokuqala yayiyi-American Airlines. UWiteck uhlala ethatha indlela yokubonisana epheleleyo. Abaxumi bokuqala babefuna iyantlukwano kunye nokubandakanywa kokubonisana okungaphaya kokuthengisa kunye nokunxibelelana. Kwi #AmericanAirlines enye yeengcebiso zakhe yokudala amaqela abasebenzi angaqhelekanga ngelo xesha. UWiteck wancedisa ngakumbi ngemigaqo-nkqubo kunye neenzuzo zabasebenzi ukuze zibandakanywe. Iinkampani kuye kwafuneka zihlale zizinzile kwingqibelelo yazo ukuze ziphile ngokwesoyikiso samaphiko asekunene. UWiteck usebenze ezinye iimveliso ezinje nge #Ford kunye #IBM. Iinkampani zazifuna ukuqonda imeko yeshishini kunye nendlela efanelekileyo yokujongana nabachasiLGBTQ umva.
#Disney yayingumbhexeshi wokuqala wamaQela amaQela ezinto ngeminyaka yoo-1990 eyaba yi # Out & Equal.
UWiteck waba negalelo ekuthatheni usuku olungaziwayo lokuPhuma luye kusuku lwesizwe nakwamanye amazwe ngo-Okthobha we-11 kunyaka ngamnye. Basebenza nabadlali abaliqela kunye namanani oluntu ukunceda ukwenza i-buzz kulo msitho uqhelekileyo uqhelekileyo. Ngo-Okthobha u-11 wakhethwa kuba yayingumhla we-1987 Matshi eWashington. Zininzi LGBTImibutho ye-Q yazala kumngcelele wokuqala kwaye uninzi emva koko.
UWiteck uncede i-MTV Logo network. Amaxesha amaninzi kuye kwafuneka ukuba aye ezintlanganisweni kunye neenethiwekhi zosasazo ukucacisa imeko yeshishini lokuhambisa umjelo omtsha. Injongo yabo yosuku lokumiliselwa yayikukufikelela kumakhaya azizigidi ezili-10. Baye bagqitha kwelokufikelela kwisigidi se-18 esasungula i-#RuPauls yemithombo yeendaba. UWiteck wabhala wabhala iincwadi zeempendulo zabathengi kuzo zonke iinethiwekhi zokusetyenziswa xa uphendula imibuzo yabathengi malunga neLogo. Ezo zikripthi kunye nokurekhodwa ngoku kugcinwe kwi #Smithsonian njengerekhodi yogcino.
UWiteck wayekwishishini lokuthengisa kunye nokunxibelelana elimele umdlali weqonga uChristopher Reeve ukumnceda ukuba afumane ukhuseleko kwimigudu yakhe yokufumana ukwenzakala.
Joyina mna noBob kwi-OutBüro, the LGBTI-Q yobungcali kunye nosomashishini uthungelwano loluntu kwi-intanethi yamafanasini, abathandana nabesini esinye, abesini esahlukileyo, abaguquli, abelungu, amahlakani, kunye nabaqeshi bethu abaxhasayo LGBTQ ukwamkela izibonelelo ezijolise ekulinganeni emsebenzini, imigaqo-nkqubo kunye nezenzo zeshishini. https://www.OutBuro.com
tags: American Airlines, UBob Witeck, UkuBhanisa, UChristopher Reeve, Ukuphuma kwemini, Ford, Nduli + uKnowlton, IBM, LGBTQ Oosomashishini, Akukho mlinganiselo, Unxibelelwano lweNtengiso, MTV, Witeck Unxibelelwano
Juni 14, 2021 (Ihlaziyiwe ngoJuni 14, 2021) E papashwe ngu UDennis Velco
Kule ngqungquthela yeeVoBoro Voices ezibandakanya LGBTIingcali ze-Q, oosomashishini, kunye neenkokheli zoluntu kwihlabathi liphela, zibamba izingxoxo zikaDennis Velco noAndy Cramer, usomashishini othengisayo, umsunguli wenethiwekhi ye-gay.com, i-ROIgenius ™, kunye nephulo lakhe elitsha nomyeni wakhe, uAl. Kuyabizwa ExtendaTouch.com.
Njengesiqhelo, sizakuzama ukubamba intliziyo yodliwanondlebe, kodwa ayisiyiyo ingxelo ebhaliweyo. Qiniseka ukuba umamele / ubukele olu dliwanondlebe kunye LGBTQ ubuvulindlela boluntu kunye nosomashishini osisigxina.
Ukukhula nge-1950's wayevaleleke ngexesha apho u-Allan Turing, ngokuqinisekileyo utata weekhompyuter, wathenwa ngenxa yobufanasini. UAndy waya kwiDyunivesithi yasePennsylvania kwisikolo i-Wharton School of Finance kunye noRhwebo. Emva kwekholeji, uAndy waya eNtshona wavula ivenkile yakhe yokuqala eAlbuquerque, eNew Mexico. UAndy wahlala apho iminyaka emi-4 ngaphambi kokuba afudukele eSan Francisco, apho wavula khona iivenkile zokuqala ngo-1977 entliziyweni yesitrato iPolk nakwisiThili saseCastro. Ngaphezulu kweminyaka engama-20 elandelayo, wakhula waya kwiivenkile ezili-10 kwaye waba ngumtsalane wasekhaya ngomculo omnandi, LGBTIimveliso ze-Q, iimpahla kunye nempahla yasekhaya. Ezi venkile zaziluphawu lwefayile kwi LGBTQ uluntu.
Njengokuba ubhubhane we-HIV / AIDS waqala ngo-1981, iivenkile zaba yindawo yokubalekela zaza zanikezela ngeenkonzo kwabo basweleyo. Ukusebenza nemibutho emininzi ye-HIV / AIDS, bakhathalela amawaka abantu ngexesha lobhubhane. Eli yayilixesha elinzima kubo bonke. UAndy ucacisa ukuba kwakungekho ncedo lwangaphandle de kuboniswe i-AIDS quilt kwi-National Mall, i-Rock Hudson yagula, no-Elizabeth Taylor wabandakanyeka-konke kuzisa ulwazi ngalo bhubhane. Kwiminyaka engama-40 bufika kubhubhane we-HIV / AIDS, izazinzulu azikavelisi isitofu sokugonya.
UAndy kwaye sincokola kancinci malunga LGBTQ asebekhulile abachithe ubomi babo ngokunyanisekileyo, kwaye ngenxa yamaziko amaninzi okunyamekela angenayo imigaqo-nkqubo kunye noqeqesho lwabasebenzi, abo LGBTQ woyike ukuphathwa gadalala nokungakhathalelwa. Amaxesha amaninzi kufuneka babuyele egumbini. Kule minyaka imbalwa idlulileyo, ezininzi LGBTAmaziko okhathalelo oluphezulu ajolise ku-Q avulekile, kodwa anokungafikeleleki kuninzi ngenxa yendawo okanye ezezimali. Inkqubo ye- LGBTUluntu lwase-Q kufuneka lujolise kumaziko onyango lwabadala njengoko sinjalo kwingqesho. Jonga i-SAGE, owona mbutho mdala kunye nomdala ozinikele ekuphuculeni ubomi be LGBT abantu abadala e https://www.sageusa.org/lei/.
Ukusuka kumava kaAndy kuthengiso kunye nabathengi abavela kwihlabathi liphela kunye namava akhe kwiminyaka yokuqala yobhubhane we-HIV / AIDS, wasibona isidingo LGBTQ yoluntu ukudibanisa. Ngaphambi kokuba iWebhu eBanzi yeHlabathi ibonakale esidlangalaleni, uAndy wasungula gay.net. Ukukhonza amalungu ngeemodem zokucofa., UAndy kunye neqela lakhe bakha eyokuqala LGBTQ ibhodi yeendaba. Amalungu aya kucofa ngokuthe ngqo esebenzisa umnxeba omde kule bhanki yeemodem. Wadibana ne-10 enkulu LGBTQ ukupapasha iindaba zabo. Baqala ngeemodem eziyi-8, emva koko bali-16. Kunyaka wokuqala, bakhula baba ngababhalisi abangama-10,000 ngenyanga. Yayiyinto enkulu.
Waqhakamshelwa ngomnye wabathengi babo bokuqala, u-Al Farmer, owayekhalaza esithi akakwazi ukufikelela kwiinkonzo kwisithuba esingaphezulu kwenyanga. UAndy ungumthengisi olungileyo, onikwa inyanga simahla. Loo mthengi waba sisixhobo esikhulu sokufunda ukuphucula inkqubo. Ngaphezulu kweminyaka emi-2, babethetha rhoqo, kwaye intlantsi yothando yakhula. UAl waba liqabane lobomi likaAndy, kwaye kwiminyaka engama-24 kamva, basonwabile kunye - bobabini njengamaqabane obomi / abayeni kunye namaqabane eshishini.
Ngo-1999 badibene ne-Gay.com kunye ne-Gay.net bedityaniswe namalungu angaphezu kwezigidi ezi-4. Ngo-2004 inkampani yaya esidlangalaleni - eyokuqala LGBTQ lokwenza njalo. Kwiminyaka eliqela kamva, yadityaniswa neLapha yeendaba. Ezo ndawo ze-intanethi zidityaniswe nezinye iisayithi kwaye ngoku ezo URL zalathisa eLos Angeles LGBTQ iZiko loLuntu.
Ngo-2020 uAndy kunye neqela lakhe basungula iExtendaTouch.com. Iqonga elingaziwayo kwi-Intanethi labanonopheli ukuba bafune iingcebiso kunye nenkxaso. Umntu angasayina efuna uncedo okanye asayine anikezele ngoncedo-okanye zombini. Lithuba lokunxibelelana nabanye abaye bahlangabezana neemeko ezifanayo. Kukho iindidi ezingaphezu kwama-30 ezijolise kumxholo, njenge-dementia, i-Alzheimer's, i-Veterans, i-PTSD, kunye nezinye ezininzi. Ikhululekile nge-100% ukuyisebenzisa. Ayililo iqonga lezonyango okanye lezentlalo. Yinethiwekhi yokufumana uncedo kunye nokufikelela ngaphezulu kwe-10,000 engenzi nzuzo kwizixeko ezingama-250 ukubonelela ngenkxaso eqhubekayo. Bakha isiseko eUnited States kwaye baceba ukukhupha inethiwekhi kwihlabathi jikelele kuluntu olukhathalelayo olusoloko lufuna uncedo.
Ukudibanisa noAndy, mfumane kwiLinkedIn apha. https://www.linkedin.com/in/andycramer100/
Joyina u-Andy kunye nam kwi-OutBüro, the LGBTI-Q yobungcali kunye nosomashishini uthungelwano loluntu kwi-intanethi yamafanasini, abathandana nabesini esinye, abesini esahlukileyo, abaguquli, abelungu, amahlakani, kunye nabaqeshi bethu abaxhasayo LGBTQ ukwamkela izibonelelo ezijolise ekulinganeni emsebenzini, imigaqo-nkqubo kunye neendlela zeshishini https://OutBuro.com
tags: UAndy Cramer, Abakhathaleli, ExtendaTouch, LGBTQ Abadala, LGBTQ Unonophelo lwaBadala
Page 1 Page 2 ... Page 9 kwiphepha elilandelayo